Xiliga Doorashada Madaxweynaha oo la go’aamiyay – WARSOOR
Muqdisho – (warsoor) – Guddiga Qaban qaabada doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyay in doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ay dhaceyso 8-Bisha February ee sanadkaan 2017-ka.
Guddiga ayaa soo saaray qoraal cadeynaya wadada loo marayo Doorashada Doorashada madaxweynaha.
January 26-29, 2017: Waxaa bilaabanaysa diiwaangelinta murashaxiinta.
January 31, 2017: Murashaxiinta Dood Wadaag
February 2-5 2017: Khudbad jeedinta murashaxiinta madaxweynaha
February 8, 2017: Waxaa dhaceysa doorashada Madaxweynaha.
Wasiirka amniga “10 ayaa ku dhimatay 51 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkii Hotel Dayax” (SAWIRO)